Sidee Barcelona u kala xulatay Kylian Mbappe iyo Ousmane Dembele | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Sidee Barcelona u kala xulatay Kylian Mbappe iyo Ousmane Dembele
Sidee Barcelona u kala xulatay Kylian Mbappe iyo Ousmane Dembele
Himilo – Barcelona ayaa dooratay inay baacsato Ousmane Dembele halkii ay ka raadin lahayd xiddiga Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe sanadkii 2017.
Mbappe ayaa ahaa xiddigii garoonka ugu fiicnaa kooxda PSG isaga oo saddexley ka dhaliyay kulankii talaadada ee wareega 16-ka tartanka champions League kana dhacay garoonka Camp Nou.
Barca ayaa horay loola xiriirinayay ciyaaryahanka reer France afar sano ka hor, laakiin kaliya waxay u dhaqaaqday saxiixa xiddiga Borussia Dortmund Dembele oo ay ka bixisay 135 milyan ginni.
Sida laga soo xigtay wakiilka kubadda cagta ee Junior Minguella, kooxda reer Catalonia ayaa xitaa heshiis kula jirtay saxiixa Mbappe ka hor inta uuna da, yarku ugu dambayn u wareegin kooxda PSG kana tagin Monaco .
Minguella oo la hadlayay wargayska Marca ayaa yidhi ”Xilliga la xaqiijiyay in uu baxayo Neymar, tababarayaasha iyo madaxweynaha Josep Maria Bartomeu waxaay shaki ka qabeen ciyaaryahanka ay rabaan in ay keenaan.
“Waxay aamminsanaayeen in Dembele uu ku habboon yahay qaab ciyaareedka kooxda marka loo fiiriyo Mbappe. Qaarkood xitaa waxay ku fogaadeen inay dhahaan Mbappe wuxuu ahaa Reer aaqireed.
“Waxaan heshiiska ku dhammeynay € 130m, oo lagu daray € 25m oo dheeri ah. Mbappe wuxuu ku fadhin lahaa inta udhaxeysa € 10-16m.”
Markii sheegashada Minguella ee suuqa kala iibsiga shaki laga geliyay baraha bulshada, wuxuu soo dhigay shaashad laga duubay sheeko WhatsApp ah oo uu kula sheekeystay agaasimaha isboortiga Barca Javier Bordas.
In kasta oo xirfadda Mbappe ay marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaysay tan iyo markii uu ku biiray PSG, haddana Dembele wakhtigiisii Barcelona waxa si xun u saameeyay dhaawacyo,ninka Faransiiska ah ayaa lagu xaddiday inuu safto 101 kulan afar xilli ciyaareed.
Previous: Qisada nololeed ee Sheekh Nuur Baaruud Gurxan
Next: Maqal- Suwar min xayaati saxaabah- Casharka 9aad